Ny fivarotana akanjo azo anaovana akanjo dia mitombo ary Apple manohy manjakazaka araky ny IDC | Avy amin'ny mac aho
Ny fivarotana akanjo azo anaovana akanjo dia mitombo ary Apple manohy manjakazaka araky ny IDC
Ny marina dia na aiza na aiza no ahitanao mpampiasa anao amin'ny famantaranandro marani-tsaina na famatrarana fehiloha. Ny tsena ho an'ny famantaranandro marani-tsaina dia tena mitombo ary amin'ity volana Jona ity araka ny IDC ny orinasa izay ambonin'izany rehetra izany dia ny Apple miaraka amin'ny Apple Watch.
Nandritra ny volana farany, ny fironana an'i Apple dia tena io, ny vaovao rehetra izay niresaka momba ny fiambenana ny zazalahy Cupertino dia nampitandrina ny amin'ny fitomboan'ny fivarotana an'ity fitaovana ity ary mitohy miakatra ny fironana, noho izany tsara ho an'i Tim Cook sy ny olony ny vaovao.
Ho an'ity taona ity 2019 ary araka ny angon-drakitra karakarain'ny IDC hatrany dia manodidina ny 222,9 tapitrisa ny fitafiana azo anaovana akanjo, ao anatin'izany ny karazana fitaovana azo ampitaina marani-tsaina toa ny bracelet, famantaranandro, headphone ary hafa Ny vinavinan'ny fitomboana dia tena tsara hatramin'ny 2023 raha antenaina izany singa 302.3 tapitrisa eo ho eo no nalefa manerana an'izao tontolo izao.
Amin'izao fotoana izao sy ny angon-drakitra ankehitriny izay hita taratra amin'ity Apple ity dia hitohy ho mpitarika amin'ity tsena ity ary amin'ity taona ity 2019 araka ny hita amin'ny fakana ambony an'i Apple manana ny isanjaton'ny varotra avo indrindra ary ny fironana dia ny mitohy toy izao . Ho hitantsika mandritra ny volana sy taona raha mitohy mitombo io fironana io satria tena mifamatotra amin'ny fivarotana fitaovana iPhone, na dia marina aza fa ny Apple Watch dia tsy miankina amin'ny telefaona Apple intsony mbola ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny fivarotana akanjo azo anaovana akanjo dia mitombo ary Apple manohy manjakazaka araky ny IDC
Ny fanadihadiana iray dia nanambara fa ny fifindrana mankany amin'ny Mac any am-piasana dia mahatonga antsika hanana vokatra bebe kokoa
AirPort Express, Extreme ary Time Capsule dia mahazo fanavaozana fiarovana na dia ajanona aza